Tsy manaiky an-dRajoelina ny zanak’i Toliara. – MyDago.com aime Madagascar
Interview, député Faberger Toliara
Auteur Solo Razafy*Publié le 20 octobre 2011 Catégories Politique
10 pensées sur “Tsy manaiky an-dRajoelina ny zanak’i Toliara.”
Tsy misy manaiky an’io n’aiza n’aiza afa-tsy ireo affairistes vereux sy ny gradés vitsivitsy lany mofo dia nivarotena tamin’ny reny malala.Fa raha izay Domelina rehefa mety olona tia tanindrazana sy mahay mampahalala ny tenany eran’ny nosy dia maharesy azy raha milatsaka ho fidina aza izy ka fifidianana mangarahara.
21 octobre 2011 à 5 h 47 min
Marina mintsy zany é tsy misy mihintsy Malagasy mba misy ati-doha manana maso sy sofina ka hanaiky an’io… ny fomba hanalàna azy sy hanafaizana azy zay no problème…!!
21 octobre 2011 à 6 h 04 min
Lainiriko – Reboza izay voadakan-dra8 no entim-po dangitra any ka nitolo-tena ho lohandohan’ny mpisorona tao anatin’ny famolavolàna ny COUP D’ETAT
I Roindefo moa dia teny an-kianja t@ andro nahavahivahy
Itony Camille asaivo miverina any LaFrantsa nametraka azy ho pm teo!
Efa hatrany amboalohany no atokisanay nareo toliara!
Marina ny anareo ê !
Vita ny alina raha misy camomille, kanefa tsy tokony hatoritory intsony amin’izao fotoana izao !
21 octobre 2011 à 8 h 41 min
Eka rô, km
21 octobre 2011 à 8 h 52 min
Ho aiza ihany isika ‘ty ry nao â ? Toa mianak’endry daholo ‘zato izy ; toa taritina ho any amin’ny lalana tsy tokony aleha ny vahoaka ?
Ndrisy !!!! Vita malaky ny any Lybie ! Niasa mafy sy nahafoy ny ainy ny vahoaka Lybianina !
Fa isika kosa mba ahoana ihany e ?!!! Toa vitan’ny wawawa foana efa 3 taona izao !
Marina fa tsy mora ny mitolona anefa….
Akoho tsy naneno tahaky izay toa………HO lasan’ny sakooo !!!
Ny mandainga sarotra fa mahakivy be ihany izato izy !!!
Petrole 99% an’ny Vozongo
Gaz : firy pour cent indray no mba ho anajarantsika ?!
Ny crevette ? – Ny vatosoa ?!!- Ny bois de rose ? Ny volamena ?!!!
Mbola hisy hijanona ho an’ity vahoaka malagasy ity ihany ve ?
Sa efa nahantra, ka dia aleo MIHA-MAHANTRA hatrany ???
Aleo halan’andriana toy izay halam-bahoaka Ra TGV .Izao koa no mety hiafaran’ialahy.Ho avy i Dada amin’ity volana Octobra ity.Tokony hampisehoana amin’io andro io amin’ ny alalan’ny RODOBE NASIONALY fa tsy izy i Domelina ary tokony hiala noho ny accord de Cotonou satria ho avy koa ny SADEC.Fotoana fandrindrana izany rodobe izany izao.Tsy adino koa ny SIT IN eo anoloan’ny masoivoho vozongo, ny famoahana ny gadra rehetra ary tokony mody izy roalahy.
Ny tena loza fa ny DJ foza indray no mampanao entretien
ny Malagasy nianatra!!! @ ity resaka PM… ahoana ary tsika ty!
22 octobre 2011 à 9 h 38 min
Efa ela ny Zanak’i Tulear no tsy tia Domelina ka izay no nahatonga ireo PM notendrena avy aty Atsimo mba hanamora ny fandraisana an’Radomelina aty Tulear. Ary vao mainka niha mafy ny fankahalanay azy satria miha betsaka ireo Sudiste ailika sady efa hita hatry ny ela fa PM kofofoake… sy tragnonjaka no voatendry! Ny maha be olona mitsena an’i domelina eto Tuléar dia satria mizara vary hohanina ka na izaho izay manoratra eto dia efa nahazo gony iray tamin’i domelina ka aza dia omenareo tsiny fa noana ny kibo… saingy Jamais jamais ho pour Domelina satria zanak’i Dada hatramin’ny tsokan-damosina. Tulear mahery loha saingy misaina ka tsy handray an’i Domelina mandrakizay!
Précédent Article précédent : Fampihavanam-pirenena : Tsy azo isandohana sy atao peta-toko
Suivant Article suivant : Communiqué CNOSC, nomination PM